🥇 Ugcino oluzenzekelayo kwimveliso yokuthunga
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 76
Ividiyo ye-accounting automation yemveliso yokuthunga
Myalelo we-automation accounting yemveliso yokuthunga
Ukuzenzekelayo kwe-accounting yemveliso yokuthunga kubenza lula ubomi babanini bamashishini kunye neevenkile kwaye ibavumela ukuba baqhubeke namaxesha. I-USU ngokungathandabuzekiyo iyinkokeli phakathi kweenkqubo ezizisebenzelayo kwaye ifanele ukuqwalaselwa. Isixhobo sethu senzelwe ukuba nawuphi na umsebenzisi angakwazi ukuyifumana ngaphandle kokungena nzulu kwiziseko zokuthunga oomatshini. Kwaye eyona nto iphambili ilele kukuba ngoku ukusetyenziswa kwemishini yokuthunga kunye nokuzenzekelayo kwenziwa kwinqanaba eliphezulu, elisemgangathweni. Siyaqonda ukuba, okokuqala, isoftware ekhethekileyo kufuneka itsale umsebenzisi ngokulula kolawulo kunye nokufikeleleka kokuqonda, akufuneki kuthathe ixesha elininzi lokufunda iziseko zokusebenza kule nkqubo, ukuba nemisebenzi eyahlukeneyo, kodwa kwangaxeshanye ixesha lilula. Ukuzenzekelayo kwe-accounting yemveliso yokuthunga kwi-1C ngoku yinto eqhelekileyo. Kodwa ngaba inkampani yakho iyayidinga le nkqubo inzima efuna useto oluninzi, inkxaso eqhubekayo evela kwiingcali kunye noqeqesho olunyanzelekileyo lwabo bonke abasebenzi? Ngokucacileyo, konke oku kungentla kufuna iindleko okokoko, ngelixa ukuthengwa kwenkqubo yethu yobalo kungathethi nayiphi na intlawulo yobhaliso ngalo lonke ixesha lokusebenza, kwaye nabani na angayisebenzisa- ukusuka kumthengisi ukuya kwiakhawunti. Akukho mfuneko yokoyisa ubunzima, kwanele ukwenza ukhetho ngokuxhasa inkqubo yendalo yonke ekuvumela ukuba ukwandise iinkqubo zemveliso ngaphandle kweendleko ezinkulu zemali kunye nezixhobo.
Imveliso yokuthunga ihlala isekwe kwimultistage. Ke ngoko, i-automation yayo ilandela ikakhulu injongo yolawulo olupheleleyo kuwo onke amanqanaba ayo. Oku kukuvumela ukuba ubone owona mfanekiso kwaye, kuwo, wenze naluphi na uhlengahlengiso kwishishini lakho. Kwangelo xesha, ukubalwa kwemali kunokwenziwa ngaphakathi kwelinye ishishini kunye nenethiwekhi yamasebe, kusetyenziswa ukungqamanisa idatha ngokulula kwi-Intanethi. Kwishishini lokuthunga, oku kuyinyani, kuba onke amanqanaba omsebenzi ahanjiswa phakathi kwabasebenzi abohlukeneyo. Ukuba bonke basebenza kwinkqubo ye-automation, oku kuqinisekisa ukuqhubeka, ukuphelisa naziphi na iimpazamo, kunye nokuqinisekisa ukungafihli kwazo zonke izenzo.
Iapps yethu yolawulo loomatshini kunye noomatshini bokushicilela kwimveliso ngaxeshanye iba sisiseko sabathengi kunye nabanikezeli ngeenkonzo, kuyanceda ukugcina ubalo lwezixhobo kunye nezixhobo kunye nokubala inqanaba elifunekayo lesitokhwe, ukujonga imisebenzi yabasebenzi, ukuhambisa iiodolo phakathi kwabo, ukuvavanya ukusebenza kwabasebenzi. Ngokwesiseko sayo, uyakwazi ukudibanisa nokusebenzisa izixhobo ezongezelelweyo zorhwebo, wenze indawo yokusebenza yomphathi wecashier, ugcine ukubalwa kwemali kweerisithi kunye neendleko, ukusebenza nabantu abatyalayo.
Ukuvavanya imveliso koomatshini bokuthunga, umsebenzi wokusebenza kunye neengxelo uluncedo: zinokuqhutywa ngesiseko sazo naziphi na izikhombisi, kwaye lonke ulwazi luboniswe ngokubonakalayo: iitafile, iigrafu, imizobo.
Kwangelo xesha, ukubalwa kwemali yenkqubo yokuzenzekelayo yemveliso ikwasisixhobo esinamandla sokusebenza kwinkonzo yabathengi: isiseko sabathengi se-elektroniki, ukuprinta okuzenzekelayo kweefom zoxwebhu, ukwazisa ngokulungela komyalelo okanye amanqanaba okuphunyezwa kwawo, ukunyuselwa kunye nokunikezelwa, izaphulelo kunye nokwenza uluhlu lwamaxabiso.
Umbane wethu awusebenzi nje kuphela, kodwa uthathela ingqalelo iimpawu zeshishini ngalinye, uhlengahlengiso, ngakumbi kwishishini lokuthunga, ukungqina ukusebenza kwalo kwiintsuku zokuqala.
Apha ngezantsi kukho uluhlu olufutshane lweempawu ze-USU. Uluhlu lwezinto ezinokwenzeka zinokwahluka ngokuxhomekeka kuqwalaselo lwesoftware ephuhlisiweyo.
Ukufakwa ngokulula kwenkqubo, ukuqala ngokukhawuleza, ukungafuneki kwinkqubo yedatha yekhompyuter;
Ixesha lokuziqhelanisa nomsebenzi kwi-automation lincinci; ungayiqonda isoftware kwaye usete inkqubo ye-automation ngosuku olunye nje;
Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zezicelo, iUSU ayifuni kutyalomali rhoqo; uhlawula kuphela ukuthengwa kwenkqubo enoluhlu olupheleleyo lwezinto onokukhetha kuzo;
Ukuzenzekelayo kunye nokusetyenziswa kweenkqubo zokuthunga kukuvumela ukuba ubeke iliso kwimveliso;
Ukuzenzekelayo kunceda ukuseka ukuhamba kwexwebhu ngombane;
Sebenzisa isicelo, unokwenza uluhlu kunye nokujonga iintshukumo zokugcina;
Uhlalutyo lwemveliso yeempahla ezigqityiweyo ziphucula imisebenzi yabasebenzi; ukuhambisa ixesha labo lokusebenza ngokufanelekileyo;
Ukusebenza kwabasebenzi kwahlulwe ngokucacileyo kwiindawo zoxanduva;
Umqeshwa ngamnye unamalungelo awahlukeneyo okufikelela ngokuxhomekeke kwisikhundla nakwigunya lakhe;
Iimodyuli zirekhoda ixesha lokwenza imisebenzi ngumqeshwa ngamnye ngokwahlukeneyo;
Itheyibhile yabasebenzi yenziwa, ngokusekwe kwidatha efakiweyo, umvuzo weyure okanye weqhekeza ubalwa;
Umsebenzi wamasebe emveliso ungqamene; iindlela zonxibelelwano phakathi kwabasebenzi zilungisiwe;
Ukuzenzekelayo kwesicelo sobalo-mali sokuthunga sikwazi ukuqhubekeka ngokulula isixa esikhulu solwazi kunye nokwenza imisebenzi emininzi;
Kulula kakhulu ukuseta i-elektroniki yokwenza izinto, kunye nesaziso kunye nenkqubo yokukhumbuza;
Iingxelo zingenziwa ngokuzenzekelayo ngokuseta ishedyuli efunekayo kunye neenqobo zazo;
Isicelo sinika ukugcinwa okuthembekileyo kunye nokukopa kwangexesha lonke ulwazi olubalulekileyo;
Onke amasebe kunye nolwahlulo lweshishini lokuthunga zihlelwa ngendlela enye, ngelixa ukusebenza kwazo kucacisiwe ngokucacileyo;
Uhlalutyo lwedatha kwi-automation yobalo lwemveliso lwenziwa rhoqo, ingxelo nganye inokuveliswa nangaliphi na ixesha nakwimeko yazo naziphi na izikhombisi ezisekwe kwiziphumo.